यौनको स्वाद | Kamsastra
Sex, अनुभव, नेपाली यौन कथा, यौनको स्वाद,
पहिलो पटक मैले कुनै पुरुषको यौन शक्तिको सामना गरिसकेकी थिएँ । त्यो अनुभव हासिल गरेको केही दिन त आफू थलिएको जस्तै भएकी थिएँ । झण्डै एक महिनासम्म मलाई पुनः यौन सम्पर्क राख्ने कुरा सोच्ने आँट नै आएन । किनकी त्यो काम कति दुःखद थियो भन्ने कुरा मैले भर्खरै जस्तो भोगेकी थिएँ ।दिन बित्दै गयो । एक दिन हाम्रो घरमा फेरि विनोद अंकल आउनु भएको थियो । उहाँले हाम्रै घरमा खाना खानुभयो । 'के छ कबिता ?' उहाँले मसँग कुराकानीको सुरुवात यही प्रश्नबाट गर्नु भएको थियो । 'ठिकै छ,' मैले जवाफ दिएँ । कुरा गर्दा गर्दै उहाँलाई मैले सोधेँ, 'बीरगंज जाने काम छैन अंकल ?' उहाँले आर्श्चर्य मान्दै सोध्नुभयो, 'किन र ? के काम छ ?'मैले कम्यूटर कोर्सका लागि बुझ्न जानु थियो भनेर उहाँलाई अर्थ्याएँ । उहाँले जाने भए जाउँ न त भनेर कुरा अघि बढाउनु भयो । केही बेरमा हामी परिवारकै सल्लाहमा बीरगंज गयौं ।
बाटोमा मैले मनमा अनेकौं कुरा खेलाएँ । बीरगंज पुगेपछि केही ठाउँमा गएर कम्प्युटर कोर्सका बारेमा बुझ्यौं पनि । तर मेरो उद्देश्य त्यो थिएन । अनि आफैंले भने, 'कस्तो गर्मी.. नुहाउन पाए पनि हुन्थ्यो ।'सायद बिनोद अंकलले मेरो कुरा चाँडै बुझ्नु भयो । अनि उहाँले भनिहाल्नु भयो, 'लजमा जाने हो त ?' मैले पनि कुरा नलुकाइकन भने, 'हुन्छ ।'हामी लजमा गयौं । एउटा कोठा बुक गरेर भित्र छिर्‍यौं । मैले नै ढोकाको चुकुल लगाएँ । अनि आफ्नो टिशर्ट उचालेर गर्मी भएको छनक पोखेँ । 'ल भन, के बिचार छ ?' उहाँले मलाई सोध्नु भयो । 'मलाई पहिलाको जस्तै बच्चा ठानेको ?' मैले पनि प्वाक्कै भनेँ ।'हेरौं न त कत्तिको तरुनी भइछस्...' भन्दै उहाँले आफ्नो जुत्ता खोल्न थाल्नु भयो । अनि क्रमशः लुगा खोल्नु भयो । उहाँको शरीरमा एउटा पेन्टीमात्र थियो । 'त्यो चाँही किन बाँकी राखेको नि ?' मैले सोधेँ ।यो खोल्ने जिम्मा चाँही तेरो..' उहाँले भन्नु भयो । मैले झट्टै उहाँको पेन्टीमा हात पुर्‍याएँ, अनि छामे । बिजुली चम्केसरी वेगमा मैले पेन्टी खोलिदिएँ । लत्रक्क परेको लाडो सुम्सुम्याउँदै गर्दा अचानक त्यो त तनक्क तन्कियो । आफ्नो आँखा अगाडी नै उसको आकार त्यसरी परिवर्तन भएको देख्दा म छक्क परिरहेको थिएँ । अनि उहाँले मलाई तँ पनि खोल न त' भन्दै मेरो कपडा खोल्न संकेत गर्नु भयो । मैले आफ्नो भेस्ट र पाइन्ट खोलेँ । सिर्फ ब्रा र पेन्टीमा थिएँ म । उहाँले त्यो पनि खोल्न भन्नुभयो । मैले पनि उहाँलाई नै खोलिदिन भनेँ । उहाँले बिस्तारै आफ्ना हात मेरो शरीरतिर ल्याउनु भयो ।निकै बेर मेरो छाती सुम्सुम्याएपछि उहाँले आफ्नो हात मेरो ढाडतिर लग्दै ब्राको हुक खोल्नु भयो । 'साह्रो पोटिलो दुध छ है तेरो त ।' उहाँले मेरो दुधको प्रशंसा गर्दै भन्नु भयो । मैले केही प्रतिक्रिया जनाइनँ । म मुठी कसेर उहाँको र्स्पर्शको आनन्द लिइरहेकी थिएँ ।मलाई उहाँको शरीर अँगाल्न हतार भइसकेको थियो । अनि मैले च्याप्प समातेँ । 'अहिले त तँ पनि खप्पिस भइसकेकी छस् कि क्या हो ?' उहाँले भन्नु भयो । 'खप्पिस भइसकेकी त छैन, तपाइँले नै बिगारेको त हो नि' ढाडस पार्दै मैले भनेँ ।'अब खप्पिस भइहाल्छेस् नि,' उहाँले भन्नु भयो, 'सेक्स गर्ने ठिक्क बेला भएको छ तेरो, बेलैमा आनन्द लिन जान्नु पर्छ ।' मैले केही भनिन । सिर्फ उहाँको स्पर्शलाई स्वागत गरिरहेकी थिएँ । उहाँले मेरा दुधसँग निकै मित्रता गाँसिसक्नु भएको थियो । सुम्सुम्याउने, मुसार्ने र चुस्ने गरिरहनु हुँदा मलाई निकै आनन्द लागिरहेको थियो । म पनि बेलाबेलामा आफ्ना दुध सुम्सुम्याउन पुग्थेँ । निकै कसिला थिए मेरा दुध । अनि उहाँले मेरो ओठमा चुम्बन गर्नु भयो । बेस्सरी ओठ चुस्नु भयो, मैले आफ्नो ज्रि्रोले उहाँको ओठ ठेल्ने कोसिस गरेँ तर उहाँले मेरो ज्रि्रो नै आफ्नो मुखमा हुलेर चुस्न थाल्नु भयो ।अनि उहाँले मेरो पेन्टी खोल्नु भयो र पुती सुम्सुम्याउनु भयो ।पुती वरिपरिका रौं मुसार्न थाल्नु भयो । अनि बेलाबखत औंला छिराउने गर्नुहुन्थ्यो । दुबै हातले पुती फट्याएर हेर्दै औंलाले पुतीको डिल माड्नु भयो । 'अंकल अझै माड्नु न । मज्जा लाग्यो ।' मैले आनन्द मान्दै भनेँ । उहाँले कुनै दाग मेट्न लागेझैं माड्नु भयो । म मदहोस भइसकेकी थिएँ ।१६वर्षीय जवान केटीसँग स्वतन्त्र रुपमा खेल्न पाउँदा उहाँ पनि सायद मख्ख पर्नु भएको थियो । मलाई पनि उहाँजस्तो पाको मान्छेलाई आफ्नो शरीर सुम्पन पाएकोमा ढुक्क लागिरहेको थियो । किनकी उहाँले पहिला पनि कुनै जोरजबर्जस्ती गर्नु भएको थिएन । मेरो पीडाको ख्याल गरेरै उहाँले त्यतिबेला मलाई नचिकिकन छोड्नु भएको थियो । फेरि मैले एक पटक त आफ्नो पुतीमा श्रीरामको लाडो पुरै हुलिसकेकी थिएँ ।यसपटक ममा आत्मपवश्वास बढेको थियो । म विनोद अंकलको लाडोलाई सर्लक्क आफ्नो पुतीभित्र निल्ने समयको प्रतिक्षामा थिएँ । तर अझै पनि डर थियो । किनकी विनोद अंकलको लाडो श्रीरामको तुलनामा झण्डै दोब्बर मोटो थियो । श्रीरामको लाडो त बल्ल तल्ल छिरेको ठाउँमा यसलाई कसरी थेग्ने होला भन्ने डर स्वाभाविक थियो ।उहाँले मेरो प्रतिक्षाको घडी अन्त्य गर्ने सुर कस्नु भयो । 'अंकल.. अलि बिस्तारै गर्नुस् है.. दुख्छ ।' मैले सुरुमै उहाँलाई सचेत तुल्याएँ । 'धत लाटी.. तँ जवान भइसकेकी छस् नि, तेरो प्वालमा अब जत्रोसुकै हतियार छिर्न सक्छ । पहिलाजस्तो बच्चा हैनस् नि, छोराछोरी जन्माउनसमेत सक्ने भइसकेकी छस् ।' उहाँले भन्नु भयो ।उहाँको कुरा सुनेर मेरो आत्मविश्वास अझ बढ्यो । अनि म उहाँको लाडोको सामना गर्न तयार भएँ । उहाँले बिस्तारै छिराउन थाल्नु भयो । सामान्य दुखाइको अनुभव भयो । तर केही बेर उहाँले तलमाथि गर्दै हल्लिएर आफ्नो हतियार स्वात्तै पसाउनु भयो । अनि दनादन पेल्न थाल्नु भयो । मलाई बल्ल सेक्सको स्वाद थाहा भयो
Labels: Sex, अनुभव, नेपाली यौन कथा, यौनको स्वाद